सत्ताको सेटिङमा ईन्धनमा कमिशन बढाउन माग गर्दै हड्तालको नाटक ! | Diyopost - ओझेलको खबर सत्ताको सेटिङमा ईन्धनमा कमिशन बढाउन माग गर्दै हड्तालको नाटक ! | Diyopost - ओझेलको खबर
सत्ताको सेटिङमा ईन्धनमा कमिशन बढाउन माग गर्दै हड्तालको नाटक !
दियो पोस्ट मंगलबार, चैत्र १५, २०७८ | १४:४४:१७
काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम क्षेत्रलाई आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐनअन्तर्गत अत्यावश्यक सूचीभित्र राखेको छ । यो क्षेत्रमा हडताल गर्न नपाउने गरि राजपत्रमा नै सुचना जारी गरिएको छ ।
०७७ मंसिर १५ गते सरकारले जारी गरेको राजपत्रअनुसार २५ वटा क्षेत्रमा हड्ताल गर्न निषेध गरिएको छ । यो २५ वटा क्षेत्रमा एलपी ग्याससहित पेट्रोलियम पदार्थको पैठारी, ढुवानी, भण्डारण तथा वितरणसम्बन्धी सेवामा अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐनअनुसार हड्ताल गर्न निषेध गरिएको छ । तर, पेट्रोलियम व्यावसाय संस्थागत समन्वय समितिले सत्ताकै सेटिङमा हड्तालको घोषणा गरेको छ । पेट्रोलियम क्षेत्रमा दादागिरी गर्दै आएको यो समितिले अब सिन्डिकेट नै लगाउन पाउनुपर्ने भन्दै आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको पाइएको छ ।
इन्धन बिक्रीबापत पाइने कमिशन नबढाएको भन्दै उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । गत फागुन २० गते ढुवानी ठप्प पारेका व्यावसायीहरुले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।
आन्दोलन घोषणा गर्नेमा नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एशोसिएशन, नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यावसायी महासंघ र नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ छन् । आगामी चैत्र २० गतेसम्म उनीहरुले विभिन्न चरणको आन्दोलन घोषणा गरेका हुन् ।
तर, आश्चर्य त के छ भने आन्दोलन घोषणा गर्ने समन्वय समितिमा आवद्ध घटकहरु सबै नेपाली कांग्रेस निकट छन् । नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वको सरकार रहनु र सरकारमै रहेको बेला हड्ताल गर्नु मानव अधिकारको उलंघन भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् ।
कतिपयको त हाल सत्तामा रहेका मन्त्रीका श्रीमतीहरुसँग पार्टनरसिप समेत छ ।
राष्ट्रिय पेट्रोलियम व्यवसाय संस्थागत समन्वय समितिका संयोजक समेत रहेका कुस प्रसाद मल्ली राजधानी ग्याँसका मालिक हुन् । नेपाल एलपी ग्याँस उद्योग संघका अध्यक्ष समेत रहेका मल्लीको राजधानी ग्याँसमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडकी पत्नि मन्जु खाँडको साझेदारी रहेको स्रोतको भनाई छ ।
त्यस्तै नेपाली कांग्रेकै तर्फबाट निर्वाचन समेत लडेका व्यक्ति हुन् विश्व अर्याल । उनी पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एशोसिएशनका निवर्तमान अध्यक्ष हुन् । उनी यो हड्तालको मूल कोरियोग्राफर भएको स्रोत बताउँछ ।
पर्दामा भने कांग्रेसकै नेता समेत रहेका लिलेन्द्र प्रसाद प्रधान छन् ।
नाटक मात्रैकी राज्यलाई घुर्की मात्रै !
घोषित आन्दोलन अनुसार गत चैत्र १० गते सम्पूर्ण एलपी ग्याँस उद्योगहरुले भारतको सबै रिफाईनरीहरुबाट एलपी ग्याँस लोड बन्द गर्ने कार्यक्रम थियो । तर, त्यस्तो भने भएको छैन । आन्दालनको कार्यक्रम घोषणा गरेर धमाधम रिफिाईनरीहरुबाट एलपी ग्याँस लोड भइरहेको स्रोतले जनाएको छ । त्यस्तै हिजो १४ गते एलपी ग्याँस उद्योगहरुले सबै नाकाबाट भन्सार छुटाउने कार्य नगर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, धमाधम भन्सार छुटाउने कार्य भइरहेको स्रोतले जनाएको छ ।
थानी निरिह !
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ठाडो आदेशमा योग्यता नपुगेकै अवस्थामा आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका उमेश प्रसाद थानी यतिबेला निरिह बनेका छन् । यसअघि नेपाली कांग्रेसकै भातृ संगठनको नेता हुँ भन्दै आयल निगममा बायोडाटा पेश गरेर नियुक्ती हत्याएका थानीले समेत हड्तालमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको आरोप छ । उनी नेतृत्वमा आएपछि नै निगममा समन्वय समितिले हड्तालको घोषणा गरेको थियो ।
‘यो हड्ताल सेटिङमै भएको हो भन्ने कुरा त थानीजीको नियुक्तीपछि आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुले नै बताउँछ,’ स्रोतले भन्यो,‘निगमको नेतृत्वले हड्ताल गर्नु अनि कमिशन बढाउनुपर्छ भन्ने आसयले परिचालित गर्नु भएको छ ।’
मंगलबार, चैत्र १५, २०७८ | १४:४४:१७